टिका सानु र कृष्ण कंडेल वि’वाद बारे बोले चर्चित गायक राजु परियार (भि,डियो सहित) – Ap Nepal
चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीका संचालक तथा गायक कृष्ण कंडेल र गायिका टिका सानु बीच कार्यक्रम कै बीच भएको केहि विवादको भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ ।
कार्यक्रमको दौरान टिका सानुले इन्द्रेणी कार्यक्रम यहाँ आउन अगाडी नहेरेको बताएकी थिइन । त्यति मात्र हैन टिकाले कलाकारले गर्दा इन्द्रेणी चलेको पनि हैन र इन्द्रेणीले गर्दा कलाकार चलेको पनि हैन भन्दै इन्द्रेणी कै मंचलाई अपमान गरेकी थिइन। त्यसपछि संचालक कृष्ण कंडेलले उनलाई सम्झाएका थिए । जुन भिडियो निक्कै भाइरल बनेको थियो ।
उक्त भिडियोमा मैले बोलेका केही राम्रा कुराहरु थिए। बिडम्बना ति कुराहरु सबै आएको पाएको छैन। जुन कुरा भाइरल भएका छन्, ति कुराहरु प्रचार गर्न लायक छैनन्।
मलाई आजको दिनसम्म ल्याउनुमा इन्द्रेणी कार्यक्रमले कुनै योगदान दिएको छैन भनेर कही भनेकी छु र ? कलाकार र संस्थाबीचको संम्बन्ध परिपुरक हुन्छ भन्नु गलत हो ? खैर इन्द्रेणी कार्यक्रमका सन्चालक आदरणीय दाजु कृष्णप्रसाद कँडेल ज्यु यतिखेर पुर्व इलाममा हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँ आउनासाथ यो विषयमा थप प्रष्ट पार्नेछौं।
साथै अर्को कुरा पूराना भिडियो काटेर पोस्ट गरेर मेरो चरित्र हत्या गर्ने, तनाव दिने, जातिय रंग दलेर गालि गर्नेहरुलाई मेरो भन्नु केही छैन। सत्य बुझ्नलाई सचेतना चाहिन्छ। नोट: कृष्ण दाइ र मेरोबीचमा कुनै मतान्तर र मन मुटाव छैन।”
यस विषयमा चर्चित लोक गायक राजु परियारले आफ्नो बिचार राखेका छन :
Prevरमेश प्रसाईको बिबाह सुरु देखि अ;न्त्य सम्म हेन्रुस , रमेशको घरमा यति धेरै रमा,इलो भएको थियो (भि’डियो सहित)
Nextगरिबीले पछि परेको यति मिठो स्वर, सबैलाई चकित पारिन यी युव’ तीले हे’र्नुहोस भिडियोमा
अभिनेत्री आंचल शर्मा हिरासतमा रहेका पल शाहको बारेमा बोलिन, गरिन खुलेरै यस्तो कुरा (भिडियो सहित)